Fandriam-pahalemana : efa mifamono ny Malagasy (sary mahatohina) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Fandriam-pahalemana : efa mifamono ny Malagasy (sary mahatohina)
Zava-doza no mitranga any amin’ny distrikan’i Betroka amin’izao fotoana. Raha ny fampitam-baovao dia namaly faty ireo dahalo taorian’ny fotoana voalaza fa nanaovan’ny fokonolona haza lambo ireo naman’izy ireo ka nahalavo ny 86. Araka ny vaovao voaray hatrany dia toa manodidina ny 50 ireo mponina nataon’ny dahalo vono moka ary tena feno habibiana ny fomba nanaovana izany. Efa mandrahona ny mbola hanohy ny valifaty ihany koa anefa ny andian-dahalo iray, izay tarihin’izany antsoina hoe Menakanjo izany, noho ny nahafaty ny namany fito tao anatin’ny fifanjevoana tamin’ny fokonolona. Vokatr’izany rehetra izany dia mihorohoro tanteraka ny mponina any Betroka sy ny manodidina.
Ankoatr’izay anefa dia dahalo 800 be izao no indray nanafika an’i Bekijolo omaly. Bekijolo dia tanàna iray mbola ao anatin’ny distrikan’i Betroka hatrany. Omby 400 no indray lasan’izy ireo nadritra izany fanafihana izany ary raha ny vaovao voaray dia 30 monja ireo zandary izay mbola manaraka ny dian’ireto mpangalatr’omby ireto amin’izao fotoana.
Mandritra izany …
Ampiana 600 ny mpiambina an-dRajoelina sy ny mpiara-miasa aminy. Ny 100 amin’ireo dia polisy avy amin’ny GIR teo aloha. Ity hery vonjy taitra iray ity dia natsahatra taorian’ny fihetsika tsy mendrika nataon’izy ireo tamin’ny namoahany ny namany teny amin’ny fitsarana raha voarohirohy tamin’ny famonoana olona izy ireo. 200 kosa ny zandary ary 300 ny miaramila. Araka ny fantatra ihany koa dia hanatevin-daharana ny DST sy ny CIS ary ny rezimanta miaro ny ao Ambohitsorohitra sy Iavoloha izy ireto.
Tsy misy lanjany amin’ny FATE ireo zandary sy miaramila miaritra ny mafy amin’ny ady ataony amin’ny asan-dahalo any amin’ny faritra fa ny hanampy isa ireo miaro ny sezany no laharam-pahamehana aminy. Tsy manahirana ny sainy ny fijalian’ny mpiray tanindrazana noho ny tsy fandriam-pahalemana fa ny fiarovany ny tenany no maha-maika azy. Ary ny tena ratsy dia toa mety be amin’izy ireo raha mifamono ny samy Malagasy mba ahafahany manamarina fa tsy milamina ny eto Madagasikara ka tsy mbola mety amin’ny Filoha RAVALOMANANA ny miverina an-tanindrazana. Ny sasany aza dia efa mandrangaranga sahady ny fiantsoana ny miaramila frantsay mitoby aty amin’ny faritra atsimon’ny ranomasim-be indiana hampangina izao asan-dahalo izao. Hiantso ny fivorian’ny andrim-pitondrana mpanao lalàna mihitsy Alain Ramaroson mba handany izany ho lalàna. Mazava hoazy fa Côte d’Ivoire sy Somalie avy hatrany no hiafaran’i Madagasikara raha izany tokoa no mitranga. Hataon’ny miaramila vahiny ahoana ohatra ny hanavaka ny mpangalatr’omby sy ny olon-tsotra ao anatin’ny fifanjevona fa dia hataon’izy ireo vono moka ny tompon-tany. Asa, mety hamerina ny fanjanahana mihitsy angamba no tanjon’ny mpanongam-panjakana !